Filtrer les éléments par date : dimanche, 16 février 2020
dimanche, 16 février 2020 20:38
Ambatondrazaka: Zandary avy namita iraka matin’ny herinaratra, olona iray sendra nandalo maty may koa
Namono olona roa ny herinaratry ny Jirama omaly hariva. Tao Vohitsara Kaominina Ambohitsilaozana, Distrika Ambatondrazaka no nitranga ny loza.
Zandary nanao taingin-droa tamin’ny moto, avy namita iraka no voasaringotry ny tariby mitondra herinaratra mahery vaika, nikiraviravy. Maty tsy tra-drano, niraikitra teo ilay zandary ; nipitika tany anaty tatatra teo ampianjerana kosa ilay sivily niaraka taminy nanao taingin-droa.
Nisy kubota nandalo fotoana vitsy taorian’izay. Nisy tovolahy iray izay nahatsikaritra ny loza efa niseho ka nihazakazaka nanivaka tany anaty bozaka hanakana ilay kubota mba hilazana fa misy tariby misy herinaratra ka mila mitandrina, kinanjo izy ndray no voasaringotry ny tariby ary maty tsy tra-drano ihany koa.
Avotra kosa ilay lehilahy nipitika tao anaty tatatra, nanao taingin-droa tamin'ny moto niaraka tamin'ilay zandary.
dimanche, 16 février 2020 19:49
Matsiatra Ambony: Hatao miaraka ny fametrahana ny samboadin'ireo Ben'ny tanàna miisa 91
Hotanterahina rahampitso alatsinainy 17 febroary 2020, ao amin'ny Gymnase Couvert Ambatomena, ny lanonana fametrahana samboady ireo tanàna miisa 91 voafidy tamin’ireo Distrika miisa fito (Ambalavao, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ikalamavony, Isandra, Lalangina, Vohibato) mandrafitra ny Faritra Matsiatra Ambony, tamin’ny fifidianana natao ny 27 novambra 2019.
Hotanterahina amin’io ihany koa no fametrahana ny samboadin'ny Depioten' Isandra sy Ikalamavony.
Teo anoloan'ny Lapan'ny Tanàna Tsianolondroa no efa voatondro hanaovana ity lanonana ity saingy noho ny fandalovan'ny andro ratsy dia izao afindra ao amin'ny Gymnase Couvert Ambatomena izao.
Fandalovan'ny Francisco: Dibo-drano ny CEG Ratsimilaho, niditra am-piangonana ny rano ao Mahanoro
Faritra isan’ny nolavovan’ilay andro ratsy Francisco i Atsinanana. Maro ireo tanàna dibo-drano vokatry ny orana nentiny, toy ny CEG Ratsimilaho ao Toamasina. Miakatra ny rano amin’iny faritra MAVAM misy an’i Vatomandry, Mahanoro, Antanambao Manampontsy ary Marolambo iny.
Hamakivaky ny afovoantany ity andro ratsy ity ary heverina hivoaka an-dranomasina any Menabe ny rahona miaraka aminy anio Alahady na Alatsinainy.
dimanche, 16 février 2020 14:01
« Rocade Marais Masay »: Fiara kely nitrongy andrinjiron’ny Jirama
Nitolefika nodomin’ny fiara kely iray ny andrinjiron’ny Jirama mitondra herinaratra mahery vaika eny amin’ny « Rocade Marais Masay ». Ny alin’ny sabotsy 15 febroary no niseho ny loza, izay niteraka fikorontanan’ny herinaratra tamina faritra vitsivitsy teto an-drenivohitra.
dimanche, 16 février 2020 13:54
Rova Antananarivo: Mitaky ny hanajana ny maha « toerana masina » azy ny fianakaviamben'ny Andriana Merina
« Toerana masina ny Rova Antananarivo ary ny fanarenana ny Rova Antananarivo sy ireo Lapa rehetra tao (Lapa Besakana, Lapa Tranovola, Lapa Manjakamiadana, Lapa Manampisoa sy ny Lapa hafa rehetra) dia tokony manaraka ny soatoavina sy ny fomba ary ny kolotsaina Andriana Merina, ary tokony haverina amin' ny endriny ivelany sy anatiny taloha izy ireo, ary tsy hampiana zavatra hafa.
Ny tsy Fanarahana izany dia miteraka ozona sy zava-doza eo amin' ny firenena ».
Io no fanambarana nataon’ny Printsy Dr. Ndriana Rabarioelina, avy amin' ny Lahimatoan'Imerina, Lehiben' ny Fianakaviamben' ny Andriana Merina sady Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara omaly 15 febroary 2020.
dimanche, 16 février 2020 13:46
Daddy: Folo taona "nihira ho an'i Jehovah"
Rakotoarivony Jean no anarany feno, Daddy kosa no anarana maha mpanakanto ahafantaran’ny maro azy. Mpikambana mpanorina ny tarika Kambana Metal, mpiangaly rock, i Daddy.
Nandeha irery ary nisafidy ny hivoy ny mozika ara-pilazantsara i Daddy nanomboka ny taona 2010. Hizara ny sanganasany etsy amin’ny Koots Food etsy Mahamasina izy ny 22 febroary izao hanamarihany io faha-10 taona nivoizany ny hira fiderana io, miaraka amina vahiny tsy ampoizina, hetsika izay nampitondrainy ny lohahevitra hoe : « Hihira ho an’i Jehovah aho ».